Calanku maro la iska xidho ujeeddo la’aan maaha (WQ: Xasan Daahir Ismaaciil “Weedhsame”) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Calanku maro la iska xidho ujeeddo la’aan maaha (WQ: Xasan Daahir Ismaaciil “Weedhsame”)
1. 28 feb 2019, ayaa booliska Hindiya shan wiil ku xidheen dhar calanka Pakistan ku sawiran yahay baad xidhateen!!!
India ma calanka pakistan bay is hayaan mise dadka reer pakistan? Muxuu calanku u dhimay ee ay ku colaadinayaan, miyaanu isagu xarqad ahayn? Idinkaa iiga jawaabi!!
2. 18 march 2013, ayaa ciyaartoy u dhashay waddanka Giriiga oo la odhan jiray ‘Giorgos Katidis’ isagoo u dabbaal-degaya gool uu dhaliyey Salaantii NAZI-ga ku damaashaaday, balse arrintaas wuxu ka dhaxlay in xulka qaranka laga saaro, funaanada wadankiisa inu dib u xidhana laga madnuuco.
Salaanta NAZI-gu ma iyadaa wax dhintay oo dadka laysay mise dadkii salanta samayn jiray ee NAZI-ga ayaa dhibta geystay? Maxaa salaanta loogu qoonsanayaa qofka sameeya ilayn waaba salaane? Idinkaa iiga jawaabi!!
3. Shirkada diyaaradaha ee Emirates ayaa dhaqan u leh inay shaqaalaha diyaarada gudaheeda ka hawlgala oo wadamo kala duwan ka soo jeeda, mid kasta Summad looga dhigo calanka wadankiisa. June 2017-kii ayey Dawlada Shiinahu amar ku siisay shirkada Emirates inay tirtirto calanka Tiawan oo ay ku bedesho ka Shiinaha “chine” iyada oo u sheegtay inay qasab tahay in loo hoggaansanaado Siyaasada mid ahaanshaha shiinaha, maadaama Tiawan uu u aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid ah dalkiisa.
Muxuu dalka shiinaha ee awoodda weynle yeeli karaa qof shaqaale ah oo diyaarad saaran calanka shaadhkiisa ku sawirani? Maxay isaga deyn weyday? Idinkaa iiga jawaabi!!
Hadday jaahilnimo ku hayso calanku
1. maro la iska xidho ujeedo la’aan maaha.
2.Maro aan wax saamayn ah lahayn oo khamiiska la midana maaha.
3. Maro dadka ka dhexaysa oo loo siman yahayna maaha.
Sidka waad wadaagtaane
Ma sagaashan baa tiisu” Hadraawi